Musharax Dr Cabdinaasir muxuu ka bedeli karaa siyaasadda Soomaaliya? | KEYDMEDIA ONLINE
Musharax Dr Cabdinaasir muxuu ka bedeli karaa siyaasadda Soomaaliya?
Dr Cabdinaasir oo mudo dheer ku noolaa Mareykanka, kana soo shaqeeyay ayaa sheegay in waxyaabaha uu isagu sharaxayo ay kamid yihiin inuu wax ka qabto cadaalad-darrada, sabooltinimada, shaqo la’aanta iyo xoojinta dowladnimada Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Musharax Dr C/naasir Cabdulle, oo markii labaad isku soo sharaxay qabashadda xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo bandhigay aragti hufan iyo qorshooyin cad oo ku aadan isbedelka Soomaaliya.
Wuxuu hogaamiye u yahay Xisbiga Gurmad oo halku-dhigiisu yahay “amni iyo horumar”, himiladiisuna tahay “In la dhiso dal Soomaaliyeed oo nabad ah, barwaaqo ah, loona wada siman-yahay kheyraadkiisa”.
Doorashadda soo socota, ayuu sheegay inay ka adagtay tahay kuwii hore, maadaama lagu jiheynayo dalka, taasoo loo baahan yahay inuu ka qeyb qaato qof walba oo Soomaali ah, oo horumar ku taamaya.
Siyaasadda is-qab-qabsiga iyo mida is-jiid-jiidka Soomaali dhexdheeda ayuu Musharaxa balan-qaadey inuu ku dhameyn doono wadahadl, wada-xaajood iyo is-ogol, islamarkaana ka shaqeyn doono siyaasad degan.
Dalka sida uu Dr C/naasir sheegay wuxuu u baahanyahay xasillooni siyaasadeed, waana midda looga gudbi karo dhibaatada dhanka doorashooyinka, amniga, dhaqaalaha, caafimaadka iyo dhinac walba.
Soomaaliya waxba iskama bedelin ayuu yiri afartii sano ee uu xukunka haystay Farmaajo marka la eego dhanka amniga, dhaqaalaha, shaqo la’aanta iyo siyaasadda, oo noqotay mid aan horey u socon oo fadhiid ah.
Siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ma ahan mid la jaanqaaday adduunka oo siyaasaddooda dibedda meel ugu qoranyihiin, tan dalka waxaad mooddaa fudeyd iyo laablakac in lagu jaangoynayo.
“Xoog iyo kelitalisnimo dalku kuma shaqeyn karo,” ayuu yiri Dr C/naasir oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay inuu dalka dan shaqsi u afduubnaado, oo indhaha laga fiiriyo Soomaaliya oo dib ugu laabanaysa dagaal sokeeye.
Musharaxa ayaa tilmaamay in Soomaaliya u baahan tahay maskax cusub, oo ka maran qabyaalad, daneysi, eex iyo nin jeclaysi, isagoo intaasi ku daray in aragti fog leh uu ka leeyahay dalka, oo hadii guuleysto uu dhamaan balan-qaadyadiisa ficil u bedeli doono.
Xasilin siyaasadeed, oo aan ahayn xasilin qori in laga helo dalka, ayaa looga gudbi karaa dhibaatooyinka taagan, taasoo fure u noqon karta in Ciidanka la dhiso, in maxkamadda dastuurka la dhiso iyo in la aado doorasho qof iyo cod ah.
Soomaaliya ayaa gashay marxalad quus ah, kadib markii Farmaajo uu ku fashilmay hogaanka dalka, hirgelinta Sarreynta sharciga, Xuquuqda aadanaha iyo Kobaca Dhaqaalaha, isagoo isku dayay inuu meesha ka saaro siyaasadii qori isku-dhiibka ee 20-ka sano soo socday.